Inqubomgomo Yobumfihlo - Buka Ukubika
Kugcine ukubuyekezwa December 24, 2020
Siyabonga ngokukhetha ukuba yingxenye yomphakathi wethu ku Buka iRipport, LLC, enza ibhizinisi njenge Buka i-Rapport (AKA - watchrapport.com) ("Buka i-Rapport (AKA - watchrapport.com)","we","us","yethuSizibophezele ekuvikeleni imininingwane yakho kanye nelungelo lakho lobumfihlo. Uma unemibuzo noma ukukhathazeka mayelana nalesi saziso sobumfihlo, noma imikhuba yethu maqondana nemininingwane yakho, sicela uxhumane nathi ku- usizo@watchrapport.com.
Uma u vakashela iwebsite yethu https://watchrapport.com/ (i- "Iwebhusayithi"), sebenzisa uhlelo lwethu lweselula, sebenzisa uhlelo lwethu lwe-Facebook, njengoba kungaba njalo (the "App") futhi ngokujwayelekile, sebenzisa noma yiziphi izinsizakalo zethu ("Imisebenzi", okubandakanya i- Iwebhusayithi futhi App), siyabonga ukuthi usithemba ngemininingwane yakho yangasese. Sibheka ubumfihlo bakho njengobucayi kakhulu. Kulesi saziso sobumfihlo, sifuna ukukuchazela ngendlela ecace bha ukuthi yiluphi ulwazi esiluqoqayo, silusebenzisa kanjani nokuthi imaphi amalungelo onawo maqondana nalo. Siyethemba ukuthi uzothatha isikhashana ukulifunda ngokucophelela, njengoba libalulekile. Uma kukhona noma yimiphi imigomo kulesi saziso sobumfihlo ongavumelani nayo, sicela uyeke ukusebenzisa Izinsizakalo zethu ngokushesha.
Lesi saziso sobumfihlo sisebenza kulo lonke ulwazi oluqoqwe Ngezinsizakalo zethu (okuchazwe ngenhla, kufaka phakathi i- Iwebhusayithi futhi App), kanye nanoma yiziphi izinsizakalo ezihlobene, ukuthengisa, ukumaketha noma imicimbi.
Sicela ufunde lesi saziso sobumfihlo ngokucophelela ngoba sizokusiza uqonde ukuthi senzani ngolwazi esiluqoqayo.
1. YILUPHI ULWAZI ESILUQOQAYO?
2. SILUSEBENZISA KANJANI ULWAZI LAKHO?
3. INGABE ULWAZI LWAKHO LUZOCHAZELWA NOMUNTU?
4. IMINININGWANE YAKHO EYODLULWA NOBANI?
5. NGABE SISEBENZISA AMAKHUKU NAMANYE AMATHEKNOLOJI ATHOLA UMkhondo?
6. NGABE SISEBENZISA I-GOOGLE MAP PLATFORM APIS?
7. SIZIPHATHA KANJANI IZINOGOGA ZAKHO ZOKUXHUMANA?
8. SIYINI ISIKHATHI SETHU KUMABHIZINISI AMAQEMBU ATHATHU?
9. SILUGCINA ISIKHATHI ESINGAKANANI ULWAZI LWAKHO?
10. SIYIGCINA NJANI IMINININGWANE YAKHO IPHEPHILE?
11. NGABE SIYALUTHOLA ULWAZI KWABANCANE?
12. YINI AMALUNGELO WAKHO OKUYIMFIHLO?
13. UKULAWULWA KOKWENZIWA KOKUNGALANDELELWA
14. INGABE IZAKHAMUZI ZASE-CALIFORNIA ZINAMALUNGELO OKUPHEPHA OKUYINHLOKO?
15. NGABE SENZA IZIBUYEKEZO KWALESI SAZISO?
16. UNGAXHUMANA NATHI NGALESI Saziso?
17. UNGABUYEKEZA KANJANI, UVUSELE, NOMA UCISHE AMADATHA ESIWAQOQA KUWE?
Imininingwane yomuntu oyivezela thina
Kafushane: Siqoqa imininingwane oyinikeza thina.
Siqoqa imininingwane yomuntu oyinikeza thina ngokuzithandela lapho wena bhalisa ku- Imisebenzi, zwakalisa intshisekelo yokuthola ulwazi olumayelana nathi noma ngemikhiqizo nezinsizakalo zethu, lapho ubamba iqhaza emisebenzini ese- Imisebenzi noma uma uxhumana nathi.
Imininingwane yomuntu esiyiqoqayo incike kumongo wokusebenzisana kwakho nathi kanye ne Imisebenzi, izinqumo ozenzayo nemikhiqizo nezici ozisebenzisayo. Imininingwane yomuntu esiyiqoqayo ingafaka okulandelayo:
Imininingwane Yomuntu Inikezwe Nguwe. Siyaqoqa amagama; izinombolo zocingo; amakheli e-imeyili; amakheli okuposa; iziqu zomsebenzi; amagama abasebenzisi; amaphasiwedi; izintandokazi zokuxhumana; idatha yokuxhumana noma yokufakazela ubuqiniso; amakheli wokukhokha; nolunye ulwazi olufanayo.
Idatha Yokukhokha. Singase siqoqe idatha edingekayo ukucubungula inkokhelo yakho uma uthenga, njengenombolo yensimbi yakho yokukhokha (njengenombolo yekhadi lesikweletu), nekhodi yokuphepha ehlotshaniswa nethuluzi lakho lokukhokha. Yonke idatha yokukhokha igcinwa ngu Thenga . Ungathola izixhumanisi zabo zesaziso sobumfihlo lapha: https://www.shopify.com/legal/privacy.
Idatha Yokungena Ngemidiya Yezenhlalo. Singakunika inketho yokubhalisa nathi usebenzisa imininingwane ye-akhawunti yakho yezokuxhumana ekhona, njenge-Facebook yakho, i-Twitter noma enye i-akhawunti yezokuxhumana. Uma ukhetha ukubhalisa ngale ndlela, sizoqoqa imininingwane echazwe esigabeni esibizwa ngokuthi "SIZIPHATHA KANJANI IZINHLANGANO ZAKHO ZOKUXHUMANA"ngezansi.
Yonke imininingwane oyinikeza thina kufanele ibe yiqiniso, iphelele futhi inembile, futhi kufanele usazise nganoma yiluphi ushintsho kulolo lwazi lomuntu siqu.
Imininingwane iqoqwe ngokuzenzakalela
Kafushane: Olunye ulwazi - olufana nekheli lakho le-Internet Protocol (IP) kanye / noma izici zesiphequluli nedivayisi - liqoqwa ngokuzenzakalela lapho uvakashela i- Imisebenzi.
Siqoqa ngokuzenzakalela imininingwane ethile lapho uvakashela, usebenzisa noma uzulazula kufayela le- Imisebenzi. Lolu lwazi aluvezi ubunikazi bakho (njengegama lakho noma imininingwane yokuxhumana) kepha ingafaka imininingwane yedivayisi nokusetshenziswa, efana nekheli lakho le-IP, isiphequluli kanye nezici zedivayisi, uhlelo olusebenzayo, okuncamelayo kolimi, ama-URL abhekisayo, igama ledivayisi, izwe, indawo , imininingwane yokuthi uyisebenzisa kanjani futhi nini i- Imisebenzi nolunye ulwazi lobuchwepheshe. Lolu lwazi ludingeka ngokuyinhloko ukugcina ukuphepha nokusebenza kwe Imisebenzi, nangezinhloso zethu zangaphakathi zokuhlaziya nokubika.
Njengamabhizinisi amaningi, siqoqa imininingwane ngamakhukhi nobuchwepheshe obufanayo.
Imininingwane esiyiqoqayo ifaka:
Idatha Yokungena Nokusetshenziswa. Idatha yokungena neyokusetshenziswa ihlobene nolwazi, ukuxilonga, ukusetshenziswa kanye nemininingwane yokusebenza amaseva ethu aqoqwa ngokuzenzakalela lapho ufinyelela noma usebenzisa eyethu Imisebenzi futhi esikurekhoda kumafayela we-log. Ngokuya ngokuthi uxhumana kanjani nathi, le datha yelog ingafaka ikheli lakho le-IP, imininingwane yedivayisi, uhlobo lwesiphequluli nezilungiselelo nolwazi mayelana nomsebenzi wakho Imisebenzi (njengezitembu zosuku / zesikhathi ezihambisana nokusetshenziswa kwakho, amakhasi namafayela abukiwe, usesho nezinye izenzo ozithathayo njengokuthi yiziphi izici ozisebenzisayo), imininingwane yomcimbi wedivayisi (efana nomsebenzi wesistimu, imibiko yephutha (kwesinye isikhathi ibizwa ngokuthi 'ukulahla kokuphahlazeka' ) nezilungiselelo zehadiwe).
Idatha Yedivayisi. Siqoqa idatha yedivayisi njengolwazi olumayelana nekhompyutha yakho, ifoni, ithebulethi noma enye idivayisi oyisebenzisela ukufinyelela ku- Imisebenzi. Ngokuya ngedivayisi esetshenzisiwe, le datha yedivayisi ingafaka imininingwane efana nekheli lakho le-IP (noma isiphakeli sommeleli), izinombolo zedivayisi nezokuhlonza uhlelo, indawo, uhlobo lwesiphequluli, imodeli yehardware yomhlinzeki wesevisi ye-Inthanethi kanye / noma inkampani yenethiwekhi, uhlelo lokusebenza nokumiswa kohlelo imininingwane.
Idatha Yendawo. Siqoqa idatha yendawo enjengolwazi olumayelana nendawo yedivayisi yakho, engaba eqondile noma engaqondile. Imininingwane engakanani esiyiqoqayo incike ohlotsheni nasezilungiselelweni zedivayisi oyisebenzisela ukufinyelela kufayela le- Imisebenzi. Isibonelo, singasebenzisa i-GPS nobunye ubuchwepheshe ukuqoqa idatha ye-geolocation esitshela indawo okuyo njengamanje (ngokuya ngekheli lakho le-IP). Ungakhetha ukungasivumeli ukuthi siqoqe lolu lwazi noma ngokwenqaba ukufinyelela kulwazi noma ngokukhubaza ukusethwa kwendawo yakho kudivayisi yakho. Qaphela kodwa, uma ukhetha ukuphuma, ungahle ungakwazi ukusebenzisa izici ezithile Zezinsizakalo.
Imininingwane eqoqwe ngohlelo lwethu lokusebenza
Kafushane: Siqoqa imininingwane ephathelene ne- indawo, umakhalekhukhwini, izaziso zohlelo lokusebenza, kanye nezimvume ze-Facebook lapho usebenzisa i-App yethu.
Uma usebenzisa i-App yethu, siqoqa imininingwane elandelayo:
Imininingwane ye-Geo-Location. Singacela ukufinyelela noma imvume yokulandela ulwazi olususelwa endaweni kusuka kudivayisi yakho yeselula, ngokuqhubekayo noma ngenkathi usebenzisa i-App yethu, ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezithile ezenzelwe indawo. Uma ufisa ukushintsha ukufinyelela kwethu noma izimvume, ungenza kanjalo kuzilungiselelo zedivayisi yakho.
Ukufinyelela Kwedivayisi Yeselula. Singacela ukufinyelela noma imvume kuzici ezithile kusuka kuselula yakho, kufaka phakathi eyedivayisi yakho yeselula imiyalezo ye-sms, izikhumbuzi, ikhamera, bluetooth, nezinye izici. Uma ufisa ukushintsha ukufinyelela kwethu noma izimvume, ungenza kanjalo kuzilungiselelo zedivayisi yakho.
Idatha Yedivayisi Yeselula. Siqoqa ngokuzenzakalela imininingwane yedivayisi (enjenge-ID yedivayisi yakho yeselula, imodeli nomenzi wayo), isistimu yokusebenza, imininingwane yenguqulo nolwazi lokumiswa kohlelo, izinombolo zedivayisi nezinhlelo zokukhomba, uhlobo lwesiphequluli nenguqulo, imodeli yehardware yomhlinzeki wesevisi ye-Intanethi kanye / noma umphathi weselula, nekheli le-Internet Protocol (IP) (noma i-proxy server). Uma usebenzisa i-App yethu, singahle siqoqe imininingwane emayelana nenethiwekhi yefoni ehlotshaniswa nedivayisi yakho yeselula, isistimu yokusebenza noma ipulatifomu yedivayisi yakho, uhlobo lwedivayisi oyisebenzisayo, i-ID yedivayisi yakho eyingqayizivele yolwazi kanye nemininingwane mayelana nezici ze- I-App yethu oyifinyelele.
Push Izaziso. Singacela ukuthumela izaziso zohlelo lokusebenza mayelana ne-akhawunti yakho noma izici ezithile zohlelo lokusebenza. Uma ufisa ukuphuma ekutholeni lezi zinhlobo zokuxhumana, ungazivala kuzilungiselelo zedivayisi yakho.
Izimvume ze-Facebook. Ngokuzenzakalelayo sifinyelela ifayela lakho le- Facebook imininingwane eyisisekelo ye-akhawunti, kufaka phakathi igama lakho, i-imeyili, ubulili, usuku lokuzalwa, idolobha lamanje, ne-URL yesithombe sephrofayela, kanye nolunye ulwazi okhetha ukuluveza obala. Futhi singacela ukufinyelela kwezinye izimvume ezihlobene ne-akhawunti yakho, njengabangani, amasheke, nokuthandwa, futhi ungakhetha ukusinika noma ukwenqabela ukufinyelela kwemvume yomuntu ngamunye. Ngeminye imininingwane mayelana nezimvume ze-Facebook, bhekisa ku Ukubhekiswa Kwemvume ye-Facebook ikhasi.
Lolu lwazi ludingeka ngokuyinhloko ukugcina ukuphepha nokusebenza kohlelo lwethu lokusebenza, lokuxazulula inkinga kanye nezinhloso zethu zangaphakathi zokuhlaziya nokubika.
Imininingwane eqoqwe kweminye imithombo
Kafushane: Singase siqoqe imininingwane ekhawulelwe kusuka kulwazi lomphakathi, ophathina bokumaketha, izinkundla zokuxhumana, neminye imithombo engaphandle.
Ukuze uthuthukise ikhono lethu lokunikeza ukumaketha okufanele, okunikezwayo kanye nezinsizakalo kuwe futhi uvuselele amarekhodi ethu, singathola imininingwane ngawe kweminye imithombo, efana nemininingwane yolwazi yomphakathi, abalingani bokumaketha ngokuhlanganyela, izinhlelo zokubambisana, abahlinzeka ngemininingwane, izinkundla zokuxhumana, kanye nakwamanye amaqembu wesithathu. Lolu lwazi lubandakanya amakheli okuposa, izihloko zomsebenzi, amakheli e-imeyili, izinombolo zocingo, idatha yezinhloso (noma idatha yokuziphatha komsebenzisi), amakheli e-Internet Protocol (IP), amaphrofayli ezokuxhumana nabantu, ama-URL ezokuxhumana nabantu kanye namaphrofayili wangokwezifiso, ngenhloso yokukhangisa okubhekiswe kukho kanye nokuphakanyiswa komcimbi . Uma uxhumana nathi enkundleni yezokuxhumana usebenzisa i-akhawunti yakho yezokuxhumana (isb. I-Facebook noma i-Twitter), sithola imininingwane yakho ephathelene nawe njengegama lakho, ikheli le-imeyili, nobulili. Noma yiluphi ulwazi lomuntu siqu esiluqoqa ku-akhawunti yakho yezokuxhumana lincike kuzilungiselelo zobumfihlo ze-akhawunti yakho yezokuxhumana.
Kafushane: Sicubungula imininingwane yakho ngezinhloso ezisuselwa kuzintshisekelo ezisemthethweni zebhizinisi, ukugcwaliseka kwesivumelwano sethu nawe, ukuhambisana nezibopho zethu zomthetho, kanye / noma nemvume yakho.
Sisebenzisa imininingwane yomuntu eqoqwe nge Imisebenzi ngezinhloso ezahlukahlukene zebhizinisi ezichazwe ngezansi. Sisebenzisa imininingwane yakho ngalezi zinhloso sincike ezithakazelweni zethu ezisemthethweni zebhizinisi, ukuze singene noma senze isivumelwano nawe, ngemvume yakho, kanye / noma ukuhambisana nezibopho zethu zomthetho. Sikhombisa izizathu ezithile zokucubungula esithembele kuzo eceleni kwenjongo ngayinye ebhalwe ngezansi.
Sisebenzisa ulwazi esiluqoqayo noma esilutholayo:
Ukwenza lula ukwenziwa kwe-akhawunti nenqubo ye-logon. Uma ukhetha ukuxhumanisa i-akhawunti yakho nathi ne-akhawunti yomuntu wesithathu (njenge-akhawunti yakho yakwa-Google noma ye-Facebook), sisebenzisa imininingwane osivumele ukuba siyilande kulabo bantu besithathu ukwenza lula ukwenziwa kwe-akhawunti nenqubo ye-logon yokusebenza inkontileka. Bona isigaba esingezansi sinenhloko "SIZIPHATHA KANJANI IZINHLANGANO ZAKHO ZOKUXHUMANA"ukuthola eminye imininingwane.
Ukuthumela ubufakazi. Sithumela ubufakazi ku- Imisebenzi engaqukatha imininingwane yakho. Ngaphambi kokuthumela ubufakazi, sizothola imvume yakho ukusebenzisa igama lakho nokuqukethwe kobufakazi. Uma ufisa ukuvuselela, noma ukususa ubufakazi bakho, sicela uxhumane nathi ku- privacy@watchrapport.com futhi uqiniseke ukufaka igama lakho, indawo enobufakazi, nemininingwane yokuxhumana.
Cela impendulo. Singasebenzisa imininingwane yakho ukucela impendulo nokuxhumana nawe mayelana nokusebenzisa kwethu Imisebenzi.
Ukuze unike amandla ukuxhumana komsebenzisi kuya kumsebenzisi. Singasebenzisa imininingwane yakho ukunika amandla ukuxhumana komsebenzisi nomsebenzisi ngemvume yomsebenzisi ngamunye.
Ukuphatha ama-akhawunti womsebenzisi. Singasebenzisa imininingwane yakho ngezinhloso zokuphatha i-akhawunti yethu futhi siyigcine isebenza ngendlela.
Ukuthumela imininingwane yezokuphatha kuwe. Singasebenzisa imininingwane yakho yangasese ukukuthumela umkhiqizo, insizakalo nolwazi olusha lwesici kanye / noma imininingwane emayelana nezinguquko kumigomo, imibandela nezinqubomgomo zethu.
Ukuvikela izinsizakalo zethu. Singasebenzisa imininingwane yakho njengengxenye yemizamo yethu yokugcina imininingwane yethu Imisebenzi iphephile futhi ivikelekile (isibonelo, ukuqapha nokuvimbela inkohliso).
Ukuphoqelela imigomo yethu, imibandela nezinqubomgomo ngezinhloso zebhizinisi, ukuhambisana nezimfuneko zomthetho nezokulawula noma mayelana nenkontileka yethu.
Ukuphendula izicelo zomthetho nokuvikela ukulimala. Uma sithola ukubizelwa enkantolo noma esinye isicelo sezomthetho, kungadingeka ukuthi sihlole imininingwane esiyiphethe ukunquma ukuthi sizophendula kanjani.
Gcwalisa futhi uphathe ama-oda akho. Singasebenzisa imininingwane yakho ukufeza nokuphatha ama-oda akho, izinkokhelo, izimbuyiselo, nokuhwebelana okwenziwe nge- Imisebenzi.
Ukuphathwa komklomelo wokudonswa kanye nemincintiswano. Singasebenzisa imininingwane yakho ukuphatha ukudonswa kwemiklomelo nemincintiswano lapho ukhetha ukubamba iqhaza emincintiswaneni yethu.
Ukuletha nokwenza lula ukulethwa kwezinsizakalo kumsebenzisi. Singasebenzisa imininingwane yakho ukukunikeza ngensizakalo eceliwe.
Ukuphendula imibuzo yomsebenzisi / ukunikela ukwesekwa kubasebenzisi. Singasebenzisa imininingwane yakho ukuphendula imibuzo yakho futhi sixazulule noma yiziphi izingqinamba ongahle ube nazo ngokusetshenziswa kweMisebenzi yethu.
Ukukuthumelela ukuxhumana kwezokukhangisa nokuphromotha. Thina kanye / noma ozakwethu bezokumaketha abavela eceleni singasebenzisa imininingwane yakho oyithumela kithi ngezinjongo zethu zokumaketha, uma lokhu kuhambisana nezintandokazi zakho zokumaketha. Isibonelo, lapho siveza intshisekelo yokuthola imininingwane ngathi noma nge Imisebenzi, ukubhalisela ukumaketha noma ngenye indlela ukuxhumana nathi, sizoqoqa imininingwane yakho evela kuwe. Ungakhetha ukuphuma kuma-imeyili wethu wokumaketha nganoma yisiphi isikhathi (bona i- "YINI AMALUNGELO WAKHO OKUYIMFIHLO"ngezansi).
Thumela imikhangiso eqondisiwe kuwe. Singasebenzisa imininingwane yakho ukuthuthukisa futhi sibonise okuqukethwe okwenzelwe wena nokukhangisa (futhi sisebenze nabantu besithathu abenza kanjalo) okwenzelwe izintshisekelo zakho kanye / noma indawo futhi ukukala ukusebenza kwayo.
Ngezinye izinhloso zebhizinisi. Singasebenzisela imininingwane yakho kwezinye izinhloso zebhizinisi, njengokuhlaziywa kwedatha, ukukhomba izitayela zokusetshenziswa, ukunquma ukusebenza kwemikhankaso yethu yokuphromotha nokuhlola nokwenza ngcono Imisebenzi, imikhiqizo, ukumaketha kanye nesipiliyoni sakho. Singasebenzisa futhi sigcine lolu lwazi ngendlela ehlanganisiwe futhi engaziwa ukuze ingahlotshaniswa nabasebenzisi bokugcina futhi ingafaki imininingwane yomuntu siqu. Ngeke sisebenzise imininingwane yakho engakhonjwa ngaphandle kwemvume yakho.
Kafushane: Sabelana ngolwazi kuphela ngemvume yakho, ukuthobela imithetho, ukukunikeza ngezinsizakalo, ukuvikela amalungelo akho, noma ukufeza izibopho zebhizinisi.
Singacubungula noma sabelane ngemininingwane yakho esiyiphethe ngokuya ngezisekelo zomthetho ezilandelayo:
Imvume: Singacubungula idatha yakho uma usinike imvume ethile yokusebenzisa imininingwane yakho yangasese ngenhloso ethile.
Izintshisekelo Ezisemthethweni: Singacubungula idatha yakho lapho kunesidingo esizwakalayo ukufeza izintshisekelo zethu zebhizinisi ezisemthethweni.
Ukusebenza Kwenkontileka: Lapho esenze khona isivumelwano nawe, singacubungula imininingwane yakho yangasese ukufeza imigomo yesivumelwano sethu.
Izibopho Zezomthetho: Singadalula imininingwane yakho lapho kudingeka khona ngokomthetho ukuthi senze lokho ukuze sithobele umthetho osebenzayo, izicelo zikahulumeni, inqubo yokwahlulela, umyalo wenkantolo, noma inqubo yezomthetho, njengokuphendula umyalo wenkantolo noma isamanisi (kufaka phakathi ukuphendula kuziphathimandla zomphakathi ukuhlangabezana nezidingo zokuphepha zikazwelonke noma zokuphoqelelwa komthetho).
Izintshisekelo Ezibalulekile: Singadalula imininingwane yakho lapho sikholwa ukuthi kunesidingo sokuphenya, ukuvimbela, noma ukuthatha izinyathelo maqondana nokwephulwa okungaba khona kwezinqubomgomo zethu, ukukhwabanisa okusolwayo, izimo ezibandakanya izinsongo ezingaba khona ekuphepheni kwanoma yimuphi umuntu nemisebenzi engekho emthethweni, noma njengobufakazi ecaleni siyabandakanyeka.
Ngokuqondile, singadinga ukucubungula idatha yakho noma sabelane ngemininingwane yakho ezimweni ezilandelayo:
Ukudluliswa Kwebhizinisi. Singabelana noma sithumele imininingwane yakho ngokuphathelene, noma ngesikhathi sokuxoxisana kwanoma yikuphi ukuhlangana, ukuthengiswa kwempahla yenkampani, ukuxhaswa ngezimali, noma ukutholwa kwazo zonke noma ingxenye yebhizinisi lethu kwenye inkampani.
Abathengisi, Ababonisi Nabanye Abahlinzeki Bezinsizakalo Zesithathu. Singabelana ngemininingwane yakho nabathengisi bezinkampani zangaphandle, abahlinzeki bezinsizakalo, osonkontileka noma abenzeli abasenzela izinsizakalo noma abamele thina futhi badinga ukufinyelela kulolo lwazi ukwenza lowo msebenzi. Izibonelo zifaka phakathi: ukucubungula ukukhokha, ukuhlaziywa kwedatha, ukulethwa kwe-imeyili, izinsizakalo zokubamba, izinsizakalo zamakhasimende kanye nemizamo yokumaketha. Singavumela abantu besithathu abakhethiwe ukuthi basebenzise ubuchwepheshe bokulandela umkhondo ku- Imisebenzi, okuzobenza bakwazi ukuqoqa imininingwane egameni lethu mayelana nokuthi uxhumana kanjani ne- yethu Imisebenzi ngokuhamba kwesikhathi. Lolu lwazi lungasetshenziselwa, phakathi kwezinye izinto, ukuhlaziya nokulandelela idatha, ukunquma ukuthandwa kokuqukethwe okuthile, amakhasi noma izici, futhi uqonde kangcono imisebenzi eku-inthanethi. Ngaphandle kokuthi kuchazwe kulesi saziso, asabelani, asithengisi, asiqashisi noma sihweba nganoma yiluphi ulwazi lwakho nabantu besithathu ngezinjongo zabo zokuphromotha. Sinezinkontileka esizisebenzisayo nezinqubo zethu zedatha, ezenzelwe ukusiza ukuvikela imininingwane yakho yangasese. Lokhu kusho ukuthi abakwazi ukwenza lutho ngemininingwane yakho yangasese ngaphandle kokuthi sibayalile. Futhi ngeke babelane ngemininingwane yakho yangasese nanoma iyiphi inhlangano ngaphandle kwethu. Baphinde bazibophezele ukuvikela imininingwane abasiphathele yona nokuyigcina kuze kube isikhathi esifundisa ngaso.
Abakhangisi Besithathu. Singasebenzisa izinkampani zokukhangisa ezivela eceleni ukuletha izikhangiso lapho uvakashela noma usebenzisa i- Imisebenzi. Lezi zinkampani zingasebenzisa imininingwane ngokuvakasha kwakho kumawebhusayithi ethu namanye amawebhusayithi aqukethwe kumakhukhi ewebhu nakwezinye ubuchwepheshe bokulandela umkhondo ukuze ikunikeze izikhangiso mayelana nezimpahla nezinsizakalo ozithandayo.
Izixhumanisi. Singase sabelane ngolwazi lwakho nabasebenzisana nathi, lapho-ke sizodinga ukuthi labo ababambisene nabo bahloniphe lesi saziso sobumfihlo. Amanxusa afaka phakathi inkampani yethu engumzali kanye nanoma yiziphi izinkampani ezingaphansi, ozakwethu bokuhlanganyela noma ezinye izinkampani esizilawulayo noma ezingaphansi kokulawulwa okufanayo nathi.
Ozakwethu bebhizinisi. Singabelana ngolwazi lakho nabalingani bethu bebhizinisi ukukunikeza imikhiqizo ethile, izinsizakalo noma ukukhuphula.
Nikeza iWall. I-App yethu ingabonisa "udonga lokunikezwa" oluvela eceleni. Udonga olunjalo luvumela abakhangisi abavela eceleni ukuthi banikele ngemali ebonakalayo, izipho, noma ezinye izinto kubasebenzisi ngenhloso yokwamukela nokuphothula ukunikezwa kwesikhangiso. Udonga olunjalo lungavela kuhlelo lwethu lokusebenza futhi lukhonjiswe kuwe ngokususelwa kudatha ethile, efana nendawo okuyo noma imininingwane yabantu. Uma uchofoza odongeni lokunikezwa, uzolethwa kuwebhusayithi yangaphandle yabanye abantu futhi uzoshiya i-App yethu. Isikhombi esihlukile, esinjenge-ID yakho yomsebenzisi, sizokwabiwa nomhlinzeki wodonga ukuze unqande ukukhwabanisa futhi ufake kahle i-akhawunti yakho ngomvuzo ofanele. Sicela wazi ukuthi asilawuli amawebhusayithi wezinkampani zangaphandle futhi asinasibopho maqondana nokuqukethwe kulawo mawebhusayithi. Ukufakwa kwesixhumanisi esiya kuwebhusayithi yomuntu wesithathu akusho ukuvuma kwethu kwewebhusayithi enjalo. Ngokunjalo, asenzi siqinisekiso maqondana nalawo mawebhusayithi wezinkampani zangaphandle futhi ngeke sibophezeleke kunoma yikuphi ukulahleka noma ukulimala okubangelwe ukusetshenziswa kwalawa mawebhusayithi. Ngaphezu kwalokho, lapho ufinyelela kunoma iyiphi iwebhusayithi yomuntu wesithathu, sicela uqonde ukuthi amalungelo akho ngenkathi ungena futhi usebenzisa lawo mawebhusayithi azolawulwa yisaziso sobumfihlo kanye nemigomo yesevisi ephathelene nokusetshenziswa kwalawo mawebhusayithi.
Kafushane: Sabelana ngolwazi kuphela nabantu besithathu abalandelayo.
Sabelana futhi siveze imininingwane yakho nabantu besithathu abalandelayo. Sihlukanise iqembu ngalinye ukuze uqonde kalula inhloso yokuqoqwa kwedatha yethu kanye nemikhuba yokucubungula. Uma sicubungule idatha yakho ngokususelwa kwimvume yakho futhi ufisa ukuhoxisa imvume yakho, sicela uxhumane nathi usebenzisa imininingwane yokuxhumana enikezwe esigabeni esingezansi esithi "UNGAXHUMANA NATHI NGALESI Saziso?".
Ukukhangisa, ukumaketha okuqondile, kanye ne-Lead Generation
Kafushane: Singasebenzisa amakhukhi nobunye ubuchwepheshe bokulandela ngomkhondo ukuqoqa nokugcina imininingwane yakho.
Singasebenzisa amakhukhi nobuchwepheshe obufanayo bokulandela (njengama-web beacons namaphikseli) ukufinyelela noma ukugcina imininingwane. Imininingwane ethile mayelana nokuthi sibusebenzisa kanjani lobu buchwepheshe nokuthi ungabenqaba kanjani amakhukhi athile ibekiwe kusaziso sethu samakhukhi.
Kafushane: Yebo, sisebenzisa i-Google Maps Platform APIs ngenhloso yokuhlinzeka ngemisebenzi engcono.
Lokhu Iwebhusayithi or App isebenzisa i-Google Maps Platform APIs engaphansi kwemigomo yesevisi ye-Google. Ungathola imigomo yesevisi ye-Google Maps Platform lapha. Ukuthola okuningi mayelana nenqubomgomo yobumfihlo ye-Google, sicela ubheke kulokhu isixhumanisi. Sithola futhi sigcine kudivayisi yakho ('isilondolozi') indawo yakho. Ungahoxisa imvume yakho noma kunini ngokuxhumana nathi kwimininingwane yokuxhumana enikezwe ekugcineni kwalo mbhalo.
Kafushane: Uma ukhetha ukubhalisa noma ungena ezinsizakalweni zethu usebenzisa i-akhawunti yezokuxhumana, singakwazi ukufinyelela kulwazi oluthile olumayelana nawe.
Our Imisebenzi ikunikeza amandla okubhalisa nokungena ngemvume usebenzisa imininingwane ye-akhawunti yakho yezokuxhumana evela eceleni (njenge-logins yakho ye-Facebook noma ye-Twitter). Lapho ukhetha ukwenza khona lokhu, sizothola imininingwane ethile yephrofayili ngawe evela kumhlinzeki wakho wezokuxhumana. Imininingwane yephrofayili esiyitholayo ingahluka ngokuya ngomhlinzeki wezokuxhumana othintekayo, kepha imvamisa izofaka igama lakho, ikheli le-imeyili, uhlu lwabangani, isithombe sephrofayili kanye neminye imininingwane okhetha ukuyenza ibonakale emphakathini kuleyo nkundla yezokuxhumana. Uma ungena ngemvume usebenzisa i-Facebook, singaphinda futhi sicele ukufinyelela kwezinye izimvume ezihlobene ne-akhawunti yakho, njengabangani bakho, ukungena, nokuthandayo, futhi ungakhetha ukusinika noma ukusenqabela ukufinyelela kwimvume yomuntu ngamunye.
Sizosebenzisa ulwazi esilutholayo kuphela ngezinhloso ezichazwe kulesi saziso sobumfihlo noma okucaciswe ngenye indlela kokufanele Imisebenzi. Sicela wazi ukuthi asilawuli, futhi asinacala, okunye ukusetshenziswa kolwazi lwakho lomuntu siqu ngumhlinzeki wakho wezokuxhumana ovela eceleni. Sincoma ukuthi ubuyekeze isaziso sabo sobumfihlo ukuze uqonde ukuthi baqoqa kanjani, basebenzise futhi babelane ngemininingwane yakho yangasese, nokuthi ungabeka kanjani izintandokazi zakho zobumfihlo kumasayithi abo nakuzinhlelo zokusebenza.
Kafushane: Asinasibopho sokuphepha kwanoma yiluphi ulwazi owabelana ngalo nabahlinzeki abavela eceleni abakhangisayo, kepha abangahlangene neWebhusayithi yethu.
The Imisebenzi ingaqukatha izikhangiso ezivela kubantu besithathu ezingahlobene nathi futhi ezingaxhuma kwamanye amawebhusayithi, izinsizakalo eziku-inthanethi noma izinhlelo zokusebenza zeselula. Asikwazi ukuqinisekisa ukuphepha nobumfihlo bemininingwane oyinikeza abantu besithathu. Noma iyiphi idatha eqoqwe abantu besithathu ayimboziwe ngalesi saziso sobumfihlo. Asinasibopho sokuqukethwe noma ubumfihlo nemikhuba nezinqubomgomo zokuphepha kwanoma yiziphi izinkampani zangaphandle, kufaka phakathi amanye amawebhusayithi, amasevisi noma izinhlelo zokusebenza ezingaxhunyaniswa Imisebenzi. Kufanele ubuyekeze izinqubomgomo zabantu abangaphandle futhi uxhumane nabo ngqo ukuphendula imibuzo yakho.
Kafushane: Sigcina imininingwane yakho isikhathi eside ngangokunokwenzeka ukufeza izinhloso ezichazwe kulesi saziso sobumfihlo ngaphandle kokuthi umthetho ufune ngenye indlela.
Sizogcina imininingwane yakho yangasese inqobo nje uma kudingeka ngezinhloso ezibekwe kulesi saziso sobumfihlo, ngaphandle uma kudingeka isikhathi eside sokugcina noma esivunyelwe ngumthetho (njengentela, ukubalwa kwemali noma ezinye izidingo zomthetho). Ayikho injongo kulesi saziso ezodinga ukuthi sigcine imininingwane yakho yangasese isikhathi eside ukwedlula isikhathi lapho abasebenzisi bane-akhawunti nathi.
Lapho singekho ibhizinisi elisemthethweni eliqhubekayo ukucubungula imininingwane yakho, sizosusa noma senze imininingwane enjalo ingaziwa, noma, uma lokhu kungenzeki (ngokwesibonelo, ngoba imininingwane yakho igcinwe ezinqolobaneni zokulondoloza), sizobe sesivikelekile gcina imininingwane yakho yangasese bese uyikhipha kunoma yikuphi ukuqhutshwa okuqhubekayo kuze kube yilapho kungenzeka ukususwa.
Kafushane: Sihlose ukuvikela imininingwane yakho uqobo ngohlelo lwezinyathelo zokuphepha zenhlangano nezobuchwepheshe.
Siqalise izindlela zokuphepha ezifanelekile zobuchwepheshe nezenhlangano ezenzelwe ukuvikela ukuphepha kwanoma yiluphi ulwazi lomuntu siqu esilucubungulayo. Kodwa-ke, ngaphandle kokuphepha kwethu kanye nemizamo yokuvikela imininingwane yakho, akukho ukudluliswa kwe-elektroniki nge-Intanethi noma ubuchwepheshe bokugcina imininingwane obungaqinisekiswa ukuthi buzovikeleka nge-100%, ngakho-ke asinakuthembisa noma siqinisekise ukuthi abaduni, abasebenza ngobugebengu, noma abanye abantu besithathu abangagunyaziwe ngeke sikwazi ukunqoba ukuphepha kwethu, nokuqoqa ngokungafanele, ukufinyelela, ukweba, noma ukuguqula imininingwane yakho. Yize sizokwenza konke okusemandleni ukuvikela imininingwane yakho, ukuhanjiswa kwemininingwane yakho kuye nakusuka kithi Imisebenzi kusengcupheni yakho. Kufanele ufinyelele kuphela Imisebenzi endaweni evikelekile.
Kafushane: Asiqoqi ngamabomu idatha kusuka noma ukuthengisa izingane ezingaphansi kweminyaka eyi-18.
Asazi ukuthi sicela idatha kusuka noma ukumaketha ezinganeni ezingaphansi kweminyaka eyi-18. Ngokusebenzisa i- Imisebenzi, umele ukuthi okungenani uneminyaka eyi-18 noma ukuthi ungumzali noma umnakekeli walowo osemncane futhi uyavuma ukuthi lowo muntu oncike ekusebenziseni Imisebenzi. Uma sithola ukuthi imininingwane yomuntu kusuka kubasebenzisi abangaphansi kweminyaka engu-18 iqoqiwe, sizokwenza i-akhawunti ingasebenzi futhi sithathe izinyathelo ezizwakalayo zokususa leyo datha ngokushesha kumarekhodi ethu. Uma wazi noma iyiphi idatha okungenzeka ukuthi sayiqoqa ezinganeni ezingaphansi kweminyaka engu-18, sicela uxhumane nathi ku- privacy@watchrapport.com.
Kafushane: Kwezinye izifunda, ezinjenge-European Economic Area, unamalungelo akuvumela ukuthi ufinyelele futhi ulawule imininingwane yakho yangasese. Ungahle ubuyekeze, ushintshe noma unqamule i-akhawunti yakho noma kunini.
Kwezinye izifunda (njenge-European Economic Area), unamalungelo athile ngaphansi kwemithetho esebenzayo yokuvikela imininingwane. Lokhu kungafaka ilungelo (i) lokucela ukufinyelela nokuthola ikhophi lemininingwane yakho yangasese, (ii) lokucela ukulungiswa noma ukusulwa; (iii) ukukhawulela ukucutshungulwa kwemininingwane yakho yangasese; futhi (iv) uma kusebenza, ekuphatheni kwedatha. Kwezinye izimo, ungahle ube nelungelo lokuphikisana nokusebenza kwemininingwane yakho yangasese. Ukwenza isicelo esinjalo, sicela usebenzise i- Imininingwane Yokuxhumana inikezwe ngezansi. Sizocubungula futhi senze ngokuvumelana nanoma yisiphi isicelo ngokuhambisana nemithetho esebenzayo yokuvikelwa kwedatha.
Uma sincike kwimvume yakho ukucubungula imininingwane yakho, unelungelo lokuhoxisa imvume yakho noma kunini. Uyacelwa ukuthi uqaphele nokho ukuthi lokhu ngeke kuthinte ukuba semthethweni kokucutshungulwa ngaphambi kokuhoxiswa kwayo, futhi ngeke kuthinte ukucutshungulwa kwemininingwane yakho eyenzelwe ngokuthembela kuzizathu ezisemthethweni zokucubungula ngaphandle kwemvume.
Uma ungumhlali e-European Economic Area futhi ukholwa ukuthi sisebenza ngokungekho emthethweni imininingwane yakho, futhi unelungelo lokukhononda kugunya lakho lendawo lokuvikela idatha. Ungathola imininingwane yabo yokuxhumana lapha: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.
Uma uhlala eSwitzerland, imininingwane yokuxhumana yeziphathimandla zokuvikela idatha iyatholakala lapha: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.
Uma unemibuzo noma imibono ngamalungelo akho obumfihlo, ungasithumela i-imeyili ku: privacy@watchrapport.com.
Uma nganoma yisiphi isikhathi ungathanda ukubuyekeza noma ukushintsha imininingwane eku-akhawunti yakho noma ukunqamula i-akhawunti yakho, unga:
Ngena ngemvume kuzilungiselelo ze-akhawunti yakho bese ubuyekeza i-akhawunti yakho yomsebenzisi.
Xhumana nathi usebenzisa imininingwane yokuxhumana enikeziwe.
Phezu kwesicelo sakho sokuvala i-akhawunti yakho, sizokwenza i-akhawunti yakho ingasebenzi noma sisuse imininingwane yethu kulwazi lwethu olusebenzayo. Kodwa-ke, singagcina imininingwane ethile kumafayili ethu ukuvimbela ukukhwabanisa, ukuxazulula izinkinga, ukusiza nganoma yiluphi uphenyo, ukuphoqelela imigomo yethu yokusetshenziswa kanye / noma ukuhambisana nezimfuneko zomthetho ezisebenzayo.
Amakhukhi nobuchwepheshe obufanayo: Iziphequluli eziningi ze-Web zisethwe ukwamukela amakhukhi ngokwakhona. Uma uthanda, ungakhetha ukusetha isiphequluli sakho ukuze ususe amakhukhi futhi wenqabe amakhukhi. Uma ukhetha ukususa amakhukhi noma wenqaba amakhukhi, lokhu kungathinta izici ezithile noma amasevisi wethu Imisebenzi. Ukukhetha ukuphuma ekukhangisweni okususelwa kuntshisekelo ngabakhangisi ku Imisebenzi Ukuvakashela http://www.aboutads.info/choices/.
Ukuphuma ekukhangisweni kwe-imeyili: Ungazikhipha ohlwini lwethu lwe-imeyili lokumaketha nganoma yisiphi isikhathi ngokuchofoza kusixhumanisi sokuzikhipha ohlwini kuma-imeyili esiwathumela wona noma ngokuxhumana nathi usebenzisa imininingwane enikezwe ngezansi. Uzobe usususwa ohlwini lwama-imeyili wokumaketha - noma kunjalo, sisengaxhumana nawe, ngokwesibonelo ukukuthumela ama-imeyili ahlobene nensizakalo adingekayo ekuphathweni nasekusetshenzisweni kwe-akhawunti yakho, ukuphendula izicelo zensizakalo, noma okunye izinhloso ezingezona zokumaketha. Ukuze ukhethe ukuphuma, unga:
Finyelela izilungiselelo ze-akhawunti yakho bese ubuyekeza okuncamelayo.
Iziphequluli eziningi zewebhu kanye nezinhlelo zokusebenza zeselula nezinhlelo zokusebenza zeselula kufaka phakathi isici se-Do-Not-Track ("DNT") noma ukusetha ongakwenza kusebenze ukukhombisa ubumfihlo bakho ukuthi ungabi nedatha emayelana nemisebenzi yakho yokuphequlula ku-inthanethi egadiwe futhi eqoqiwe. Okwamanje alikho izinga lobuchwepheshe elifana nelinye lokwazi nokusebenzisa amasiginali we-DNT osekuqediwe. Ngakho-ke, njengamanje asiphenduli kwizimpawu zesiphequluli se-DNT noma enye indlela edlulisela ngokuzenzakalela ukukhetha kwakho ukuthi kungalandelelwa ku-inthanethi. Uma kwamukelwa indinganiso yokulandela ngomkhondo online okufanele siyilandele ngokuzayo, sizokwazisa ngalowo mkhuba kunguqulo ebukeziwe yalesi saziso sobumfihlo.
Kafushane: Yebo, uma uhlala eCalifornia, unikezwa amalungelo athile maqondana nokufinyelela kulwazi lwakho siqu.
I-California Civil Code Isigaba 1798.83, esaziwa nangokuthi umthetho we "Shine The Light", sivumela abasebenzisi bethu abayizakhamizi zaseCalifornia ukuthi bacele futhi bathole kithi, kanye ngonyaka futhi mahhala, imininingwane emayelana nemikhakha yemininingwane yomuntu (uma ikhona) thina kudalulwe kubantu besithathu ngezinjongo zokumaketha ngqo kanye namagama namakheli abo bonke abantu besithathu esabelane nabo ngemininingwane yomuntu ngonyaka wekhalenda osandulele. Uma ungumhlali waseCalifornia futhi ungathanda ukwenza isicelo esinjalo, sicela uthumele isicelo sakho ngokubhalela kithi usebenzisa imininingwane yokuxhumana enikezwe ngezansi.
Uma uneminyaka engaphansi kwengu-18 ubudala, hlala eCalifornia, futhi une-akhawunti ebhalisiwe nayo insiza, unelungelo lokucela ukususwa kwedatha engadingeki oyithumela esidlangalaleni ku- Imisebenzi. Ukucela ukususwa kwedatha enjalo, sicela uxhumane nathi usebenzisa imininingwane yokuxhumana enikezwe ngezansi, bese ufaka ikheli le-imeyili elihlotshaniswa ne-akhawunti yakho nesitatimende esihlala eCalifornia. Sizoqinisekisa ukuthi idatha ayikhonjiswa esidlangalaleni ku- Imisebenzi, kodwa sicela wazi ukuthi idatha kungenzeka ingasuswa ngokuphelele noma ngokuqondakalayo kuzo zonke izinhlelo zethu (isb. izipele, njll.).
Isaziso Sobumfihlo se-CCPA
Ikhodi Yemithetho yaseCalifornia ichaza "umhlali" njengo:
(1) wonke umuntu oseSifundazweni SaseCalifornia ngaphandle kwenhloso yesikhashana noma yesikhashana futhi
(2) wonke umuntu ophethwe yi-State of California ongaphandle kwe-State of California ngenhloso yesikhashana noma yesikhashana
Bonke abanye abantu bachazwa ngokuthi "abangebona abahlali."
Uma ngabe le ncazelo "yomhlali" isebenza kuwe, kufanele silandele amalungelo athile nezibopho maqondana nemininingwane yakho.
Yiziphi izigaba zolwazi lomuntu siqu esiziqoqayo?
Siqoqe le mikhakha yolwazi lomuntu siqu kulezi zinyanga eziyishumi nambili (12) ezedlule:
Imininingwane yokuxhumana, njengegama langempela, i-alias, ikheli leposi, inombolo yocingo noma yeselula, isihlonzi esihlukile somuntu siqu, isihlonzi esiku-inthanethi, ikheli le-Internet Protocol, ikheli le-imeyili negama le-akhawunti
B. Izigaba zolwazi lomuntu siqu ezibhalwe kumthetho wamaRekhodi Amakhasimende waseCalifornia
Igama, imininingwane yokuxhumana, imfundo, ukuqashwa, umlando wokuqashwa kanye nolwazi lwezezimali
C. Izici ezihlukanisiwe ezihlukanisiwe ngaphansi kweCalifornia noma umthetho wesifundazwe
Ubulili nosuku lokuzalwa
D. Imininingwane yezohwebo
Imininingwane yokuthengiselana, umlando wokuthenga, imininingwane yezezimali nolwazi lokukhokha
Izigxivizo zeminwe nama-voiceprints
F. I-inthanethi noma omunye umsebenzi wenethiwekhi ofanayo
Umlando wokuphequlula, umlando wosesho, ukusebenza kwe-inthanethi, idatha yenzalo, nokuxhumana namawebhusayithi wethu namanye ama -apps, izinhlelo, amasistimu nezikhangiso
H. Okulalelwayo, okwe-elekthronikhi, okubukwayo, okushisayo, okukhohlisayo, noma imininingwane efanayo
Izithombe nokulalelwayo, ividiyo noma okuqoshiwe okwenziwe ngokuhlobene nemisebenzi yethu yebhizinisi
Imininingwane ephathelene nomsebenzi noma nomsebenzi
Imininingwane yokuxhumana yebhizinisi ukuze ikunikeze izinsizakalo zethu ezingeni lebhizinisi, isihloko somsebenzi kanye nomlando womsebenzi neziqu zobungcweti uma ufaka isicelo somsebenzi nathi
Amarekhodi abafundi nolwazi lwemibhalo
K. Okucashuniwe kuthathwe kolunye ulwazi lomuntu siqu
Okucashuniwe okuthathwe kunoma yiluphi ulwazi lomuntu siqu oluqoqwe ngenhla ukudala iphrofayili noma isifinyezo mayelana, ngokwesibonelo, izintandokazi nezici zomuntu
Singase futhi siqoqe olunye ulwazi lomuntu siqu ngaphandle kwalezi zigaba lapho uxhumana nathi uqobo, ku-inthanethi, noma ngocingo noma ngeposi ngokuya:
Ukuthola usizo ngeziteshi zethu zokusekela amakhasimende;
Ukubamba iqhaza ocwaningweni lwamakhasimende noma emincintiswaneni; futhi
Ukugqugquzela ukulethwa kwezinsizakalo zethu nokuphendula imibuzo yakho.
Sisebenzisa kanjani futhi sabelana ngolwazi lwakho lomuntu siqu?
Buka iRipport, LLC iqoqa futhi yabelane ngolwazi lwakho siqu ngokusebenzisa:
Amakhukhi aqondisiwe / amakhukhi wokumaketha
Amakhukhi ezokuxhumana nabantu
Ama-Beacon / Amaphikseli / Amathegi
Ama-plugins ezokuxhumana nabantu: Facebook, Twitter , -Google futhi Amazon. Sisebenzisa izici zokuxhumana nomphakathi, njengenkinobho ye-Facebook Like, namawijethi, njengenkinobho ethi 'Yabelana Lokhu' kwiWebhusayithi yethu. Izici ezinjalo zingacubungula ikheli lakho le-Internet Protocol (IP) bese zilandelela ukuthi yiliphi ikhasi olivakashelayo kuwebhusayithi yethu. Singabeka ikhukhi ukunika amandla isici ukuthi sisebenze kahle. Uma ungene ngemvume kungxenyekazi ethile yezokuxhumana futhi uxhumana newijethi noma inkinobho engaphansi kwaleyo nkundla yezokuxhumana, lolu lwazi lungaqoshwa kuphrofayela yakho yaleyo nkundla yezokuxhumana. Ukugwema lokhu, kufanele uphume kuleyo nkundla yezokuxhumana ngaphambi kokungena noma kokusebenzisa Imisebenzi. Izici zemidiya yezenhlalo namawijethi zingabanjelwa umuntu wesithathu noma zibanjwe ngqo kuwebhusayithi yethu. Ukusebenzisana kwakho nalezi zici kulawulwa izaziso zobumfihlo zezinkampani ezinikezayo. Ngokuchofoza kwenye yalezi zinkinobho, uyavuma ukusetshenziswa kwale plugin futhi ngenxa yalokho ukudluliswa kolwazi lomuntu siqu kuya kwinsizakalo yemidiya yokuxhumana ehambisanayo. Asinakulawula ingqikithi nobukhulu bale mininingwane edlulisiwe kanye nokusebenza kwayo okwengeziwe.
Imininingwane engaphezulu mayelana nokuqoqwa kwethu kwedatha nemikhuba yokwabelana ingatholwa kulesi saziso sobumfihlo.
Ungaphuma ekuthengisweni kwemininingwane yakho yangasese ngokukhubaza amakhukhi kuzilungiselelo ze-Cookie Preference bese uchofoza kusixhumanisi esithi Ungathengisi Ulwazi Lwami Lomuntu siqu ekhasini lethu eliyisiqalo.
Ungaxhumana nathi nge-imeyili ku- usizo@watchrapport.com, ngokubiza inombolo yamahhala ku (800) 571-7765, ngokuvakashela https://watchrapport.com/pages/contact-us, I-297 Kingsbury Ibanga, iSuite 100 Lake Tahoe (Stateline) NV 89449, noma ngokubhekisa kwimininingwane yokuxhumana engezansi kwalo mbhalo.
Uma usebenzisa i-ejenti egunyaziwe ukusebenzisa ilungelo lakho lokukhetha ukuphuma singasenqaba isicelo uma i-ejenti egunyaziwe ingalethi ubufakazi bokuthi igunyaziwe ngokusemthethweni ukuthi ikwenzele.
Ngabe imininingwane yakho izokwabelwa omunye umuntu?
Singadalula imininingwane yakho nabanikezeli bethu bezinsizakalo ngokuya ngenkontileka ebhaliwe phakathi kwethu nomhlinzeki ngamunye wesevisi. Umhlinzeki ngamunye wesevisi uyibhizinisi elenzelwa inzuzo elicubungula imininingwane egameni lethu.
Uhlu lwamanje lwabahlinzeka ngemisebenzi yethu lungatholakala ngezansi.
Singase sisebenzise imininingwane yakho yangasese ngezinjongo zethu zebhizinisi, njengokwenza ucwaningo lwangaphakathi ekuthuthukiseni ubuchwepheshe nasekuboniseni. Lokhu akubhekwa njengoku "thengisa" idatha yakho yomuntu siqu.
Buka iRipport, LLC udalule izigaba ezilandelayo zolwazi lomuntu siqu kubantu besithathu ngenhloso yebhizinisi noma yokuhweba ezinyangeni eziyishumi nambili (12) ezandulele:
Isigaba B. Imininingwane ephathelene nawe, njengoba ichaziwe kumthetho wamaRekhodi Amakhasimende waseCalifornia, njengegama lakho, imininingwane yokuxhumana, imfundo, umsebenzi, umlando wokuqashwa kanye nolwazi lwezezimali.
Izigaba zabantu besithathu esidalule kubo imininingwane yomuntu ngebhizinisi noma ngenjongo yezentengiso zingatholakala ngaphansi kwe- "IMINININGWANE YAKHO IZODLULISELWA NOBANI?".
Buka iRipport, LLC uthengise le mikhakha yolwazi lomuntu siqu kubantu besithathu ezinyangeni eziyishumi nambili (12) ezidlule
Izigaba zabantu besithathu esithengise kubo imininingwane yomuntu yilezi:
Amalungelo akho maqondana nedatha yakho yomuntu siqu
Ilungelo lokucela ukususwa kwedatha - Cela ukususa
Ungacela ukususwa kolwazi lwakho lomuntu siqu. Uma usicela ukuthi sisuse imininingwane yakho yangasese, sizohlonipha isicelo sakho futhi sisuse imininingwane yakho yangasese, kuncike kokuhlukile okuhlinzekwe ngumthetho, okufana (kepha kungagcini lapho) ukusetshenziswa komunye umthengi welungelo lakhe lokukhuluma ngokukhululeka , izidingo zethu zokuthobela umthetho ezibangelwa yisibopho somthetho noma ukucubungula okungadingeka ukuvikela ezintweni ezingekho emthethweni.
Ilungelo lokwaziswa - Cela ukwazi
Ngokuya ngezimo, unelungelo lokwazi:
noma ngabe siqoqa futhi sisebenzisa imininingwane yakho;
imikhakha yolwazi lomuntu siqu esiyiqoqayo;
izinhloso imininingwane yomuntu eqoqelwe yona esetshenziselwa yona;
ukuthi siyayithengisa yini imininingwane yakho yomuntu siqu kubantu besithathu;
imikhakha yemininingwane yomuntu esiyithengisile noma esiyidalulile ngenhloso yebhizinisi;
izigaba zabantu besithathu lapho imininingwane yomuntu ithengiselwe noma yadalulwa khona ngenhloso yebhizinisi; futhi
injongo yebhizinisi noma yezohwebo yokuqoqa noma yokuthengisa imininingwane yomuntu.
Ngokuya ngomthetho osebenzayo, asiphoqelekile ukunikeza noma ukususa imininingwane yabathengi ekhonjwe ngokungaphendulwa esicelweni somthengi noma ukukhomba kabusha idatha yomuntu ngamunye ukuqinisekisa isicelo somthengi.
Ilungelo Lokungacwaswa Ekusebenziseni Amalungelo Obumfihlo Womthengi
Ngeke sikucwase uma usebenzisa amalungelo akho obumfihlo.
Lapho sithola isicelo sakho, sizodinga ukuqinisekisa ubunikazi bakho ukunquma ukuthi nguwe lowo muntu esinolwazi ngaye mayelana nesistimu yethu. Le mizamo yokuqinisekisa idinga ukuthi sikucele ukuthi usinikeze ulwazi ukuze sikwazi ukulufanisa nolwazi osinikeze lona phambilini. Isibonelo, kuye ngohlobo lwesicelo osithumelayo, singakucela ukuthi unikeze imininingwane ethile ukuze sikwazi ukufanisa imininingwane oyinikezayo nolwazi esesivele sinalo kufayela, noma singaxhumana nawe ngendlela yokuxhumana (isib. Ifoni noma i-imeyili) osinikeze yona phambilini. Singaphinda sisebenzise ezinye izindlela zokuqinisekisa njengoba izimo zisho.
Sizosebenzisa imininingwane yakho uqobo enikezwe esicelweni sakho ukuqinisekisa ubunikazi noma igunya lakho ukwenza isicelo. Ngezinga okusemandleni ngalo, sizokugwema ukucela imininingwane eyengeziwe kuwe ngezinhloso zokuqinisekisa. Uma, noma kunjalo, uma singeke sikwazi ukuqinisekisa ubuwena bakho kulwazi esivele silugcinile, singacela ukuthi unikeze imininingwane eyengeziwe ngenhloso yokuqinisekisa ubuwena, kanye nezinjongo zokuphepha noma zokuvikela inkohliso. Sizosusa imininingwane enjalo enikeziwe ngokungeziwe lapho nje siqeda ukukuqinisekisa.
Amanye amalungelo wobumfihlo
ungaphikisana nokusebenza kwedatha yakho yomuntu siqu
ungacela ukulungiswa kwemininingwane yakho uma ingalungile noma ingasasebenzi, noma ucele ukukhawulela ukucubungula idatha
ungakhetha i-ejenti egunyaziwe ukuthi ikwenzele isicelo ngaphansi kwe-CCPA. Singasenqaba isicelo esivela kumenzeli ogunyaziwe esingalethi ubufakazi bokuthi bagunyazwe ngokusemthethweni ukuthi bakwenzele i-CCPA.
ungacela ukuphuma ekuthengiseni imininingwane yakho yangasese kubantu besithathu. Lapho sithola isicelo sokukhetha ukuphuma, sizosebenza ngesicelo ngokushesha okungenzeka, kepha kungakadluli izinsuku eziyi-15 kusukela ngosuku lokufakwa kwesicelo.
Ukuze usebenzise la malungelo, ungaxhumana nathi nge-imeyili ku- usizo@watchrapport.com, ngokubiza inombolo yamahhala ku (800) 571-7765, ngokuvakashela https://watchrapport.com/pages/contact-us, I-297 Kingsbury Ibanga, iSuite 100 Lake Tahoe (Stateline) NV 89449, noma ngokubhekisa kwimininingwane yokuxhumana engezansi kwalo mbhalo. Uma unesikhalazo mayelana nokuthi siyiphatha kanjani idatha yakho, singathanda ukuzwa kuwe.
Kafushane: Yebo, sizobuyekeza lesi saziso lapho kudingeka ukuze sihlale sithobela imithetho efanele.
Singabuyekeza lesi saziso sobumfihlo ngezikhathi ezithile. Uhlobo olusha luzokhonjiswa ngosuku olubuyekeziwe "Olubuyekeziwe" futhi inguqulo ebuyekeziwe izosebenza ngokushesha lapho itholakala. Uma senza ushintsho olubonakalayo kulesi saziso sobumfihlo, singakwazisa ngokuthumela ngokugqamile isaziso soshintsho olunjalo noma ngokukuthumela ngqo isaziso. Sikukhuthaza ukuthi ubuyekeze lesi saziso sobumfihlo kaningi ukuze waziswe ngokuthi siluvikela kanjani ulwazi lakho.
Uma unemibuzo noma imibono mayelana nalesi saziso, unga sithumele i-imeyili ku privacy@watchrapport.com noma ngeposi ku:
297 IKingsbury Ibanga
ILake Tahoe (Isitatimende), NV 89449
17. UNGABUYEKEZA KANJANI, UVUSELE, NOMA USUSE AMADATHA ESIWAQOQA KUWE?
Ngokuya ngemithetho esebenzayo yezwe lakini, ungaba nelungelo lokucela ukufinyelela kulwazi lomuntu siqu esiluqoqa kuwe, silushintshe lolo lwazi, noma ulususe kwezinye izimo. Ukucela ukubuyekeza, ukuvuselela, noma ukususa imininingwane yakho, sicela thumela ifomu lesicelo ngokuchofoza lapha. Sizophendula esicelweni sakho zingakapheli izinsuku ezingama-30.
Le nqubomgomo yobumfihlo yadalwa kusetshenziswa i- Umenzi wenqubomgomo yobumfihlo we-Termly.